Onye nleta nleta na Budget Friendly Dubai - Gaa na UAE!
Ntụziaka onye njem nleba anya na Budget Friendly Dubai, Mgbe ị hụbeghị nke a Anyanwụ obodo Dubai na 2020. Mana ịchọrọ ahụmịhe nke vibes nke obodo na-enweghị igwu oghere na akpa gị, ị gaghị amaba amaka mmefu ego a na otu oge na ahụmịhe nke ndụ gị.
Dubai nwere otutu na otutu inye ma you di elu na njem, ma ọ bụ connoisseur nke nri, mmanya, ma ọ bụ bụ onye hụrụ egwu na ọdịdị n'anya, ma ọ bụ naanị chọrọ were ụmụ gị maka ụfọdụ ahụmịhe nke ndụ ya na oke nchekwa & ocha. Naanị ịchọrọ ihe & obodo nwere gị!
Nke kachasi iri m ga-aga / atụle ihe ndị dị na ebe a:
N'ebe a, ị na-ahụ ụzọ ọdịnala ndị Arab si na-asọpụrụ aja ndị ọlaedo… enwere na-agba kamel, ndị njem na-agba agba na Land Cruiser na dunes, na-eri nri. Ahụmahụ n’asụsụ Arabik Ndi Majlis nwere ndi no na-egwu egwu, onyunyo nke henna, ihe nlere nke ndi Arab na eji akwa, ihe ndi ozo di egwu. Ihe ụfọdụ a na-enye gụnyere ịbanye n'ụgbọ ájá (ma ọ bụ ị nwere ike iweta nke gị), igwe kwụ otu ebe Quad wdg.
Ihe ị ga-echeta:
Yiri uwe ndị dị mma, na-agbanye otu eriri ọkụ na-acha ọkụ
Wee akwa akpụkpọ ụkwụ
Nwee ntutu isi gị
Soro elu SPF & ezigbo shades
Na-ebu mmiri na nri nri dị ka nkata na-amalite site na mgbede.
ỤBỌDỤ: Ụgwọ tiketi dị iche iche site n'aka AED 70 site na onye ọ bụla gaa na AED 250 site na onye dabere na ụlọ ọrụ nleta ị na-ede akwụkwọ gị.
Chọpụta ihe banyere Visa na Dubai.
2. Gaa na ebe obibi Burj Khalifa dị ebube, Dubai na ala ụlọ ahịa Dubai
Chee echiche banyere Dubai & ị gaghị echezọ iche maka ihe ndị a. Nke kachasi elu, nke kachasị mma & ndị kasị ibu n'ụwa.
Ọ bụrụ na ị na-atụ egwu ịdị elu & ị chọrọ ịnọgide na-enwe ọmarịcha ịma mma nke injinia a, ị nwere ike ịga Dubai Nnukwu Mlọ Ahịa & lelee isi iyi & laser ọkụ na-egosipụta na Burj Khalifa, ebe ihe ngosi egwu a na-ahụ anya bụ ọkara awa ọ bụla, ngosipụta ọkụ laser na ụlọ elu kachasị elu nwere oge, lelee peeji mgbasa ozi mmekọrịta ha ma nye ha nnwale.
Detuo tiketi gị n'ihu ma ọ bụrụ na ịchọrọ njem Burj Khalifa.
Gaa leta n’oge ehihie ka anwụ wee ghara ịgbanye n’ọkụ ahụ.
Yiri akpụkpọ ụkwụ dị mma, enwere nhọrọ nke enyemaka oche.
ỤBỤDỤ: Ọtụtụ n'efu
Ọ bụrụ n’ezie ị chọrọ ịma otú ọ dị ka ọ dị ịdị na elu ụwa, n'ụzọ nkịtị, mgbe ahụ ahapụla ileta na Top nke Burj Khalifa.
Nchịkọta na-amalite site na AED 150 site na onye ọ bụla & gaa n'ihu, ebe nrụọrụ weebụ ha nwere ọtụtụ nchịkọta ọnụ.
3. Obodo Obodo Nile
Cheedị echiche ebe ụwa ihe nketa ụwa na-ezukọta, ebe ị nwere ike ịga hụ ụlọ ụlọ na ihe ncheta nke ọtụtụ mba chọrọ, ị nwere ike ịhụ ihe ngosi ọdịnala ha, nri & omenka ị nwere ike itu ọnụ. nye ndị ezinụlọ gị na ndị enyi gị. Ileta ọnụnọ mba ndị a ị mara nke ọma, na ọ bụrụgodi na ịnya isi na ịga na obodo ndị a na mmadụ, mmadụ nwere ike ịda n'ihi ya.
N'ebe ahụ, ha nwere ihe ncheta, ngwa nri, uwe ejiji, nri, ngwa na ihe ọ bụghị. Gaa na nke a echefughi njem omenala otu ugboro na Dubai.
Ebe ahụ bụ nnukwu & chọrọ oge kachasị elekere 4.
Ọ na-emepe na 4 PM ruo 12 n'etiti abalị n'ụbọchị ọ bụla (October-April) & nụkọta oge ọ bụla na-agafe agafe na ụzọ na-agafe, gbanwee ya n'usoro.
Ị nwere ike ịnweta enyemaka oche oche maka ndị agadi nakwa ịbanye maka ndị agadi.
Na-ebu mmiri na nri (ma ọ bụrụ na ị nwere obere ụmụaka), ọ bụ ezie na ọ dị n'ime ya
Jiri akpụkpọ ụkwụ dị mma na-ebu akpụ akpụkpọ ụkwụ
NDỤMỌDỤ: 15 AED site na onye ọ bụla, umuaka n'okpuru 3 & ndị okenye nọ na-aga n'efu
4. Nweta Bedazzled na Gold & Spice Souks, Al Seef Obodo, Old Dubai & DHOW njem
Gị Bur Dubai na Deira, ị ga-enwe mmetụta nke oge ochie & a obere mmetụta nke Indian Open ahịa tumadi na mpaghara Meenabazar. N'ebe a, inwere udiri udiri udiri udiri udiri anwuru anwu nke ị na adighi anacha dika gi.Zatar“. Goolu eresị na UAE bụ otu n'ime ihe kachasị mma, ọ bụrụ na ị bụ onye Indiayou ga - ama uru ole ọla a bara uru barala na ndụ anyị… agbanyeghị, lee ị ga-ahụ atụmatụ ị na-ahụtụbeghị mbụ.
Gaa na Dobara Abara, ọ na-atọ ụtọ ịga njem n'ime obodo ahụ ile anya ochie na ụwa ọhụrụ nke Dubai na-ebikọ.
Na Al seef Obodo, a na-eme ụlọ oriri na ọṅụṅụ dị ka ụlọ obibi na Old Arabic Village style & ebe a dị nnọọ mma nke a ga-efu, ọ ga-echeta otu n'ime Delhi's Khau Gully ...
ỤBỌDỤ: Ụzọ ụgbọ mmiri si amalite site na AED 70, dabere na nke ị na-ahọrọ. Ị nwere ike ịgagharị na Abara Naanị ụgbọ mmiri (AED 1) ma ọ bụ na-ebu tagzi mmiri (AED 20) ma ọ bụ ụgbọ mmiri na-agbago si Marina (AED 50). Echiche ahụ dị egwu.
5. Atlantis na Nkwụ, Nkwụ nke Jumeirah
ọ ozo bu ihe ijuanya nke injinia & agwaetiti ndi mmadu buru ibu. Nlọ ndị a mara mma nke ụfọdụ ndị ama ama na ụwa. Islọ oriri na ọisụ Atlantụ Atlantis bụ otu ụlọ oriri mara mma ileta, maka ogige mmiri ya, ụlọ ndị furu efu wdg.
Iji nweta echiche dị egwu banyere nkwụ (AED 20 maka tiketi ịlaghachi na onye ọ bụla), banye na monorails, ma ọ bụghị ị nwere ike ịbanye na tagzi, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị bụ nnukwu otu ndị mmadụ & achọghị ịchọ imefu ego.
Ọnụ: Na-adabere n'ịgba oge
6.Dubai Ubi Miracle
Nke a bụ ụwa kasị ukwuu & kasị mara mma ifuru ubi, otu enweghị ike iche ọtụtụ osisi dị mma nke ọma na mba a na-akpọ ala kpọrọ nku, kwa afọ, ha nwere ihe ndozi pụrụ iche & isiokwu ọkpụkpụ dịka ịhụnanya, ụgbọ elu, afọ nke Mickey wdg.
NDỤKWỌ: AED 50per onye, ​​ụmụaka karịa 12 afọ 40 AED.
Ebe E Si Nweta: https://fashionelka.pl/zycie-warto-smakowac-dubai-miracle-garden/
Njem gị ezughị ezu n'enweghị ihe osise Burj Al Arab na azụ. Ha nwere otutu ájá, ájá dị ọcha, ọkwá, nri ndị ọzọ na-abụghị, ije ije na njem egwu, ụlọ ọrụ mposi ọma na ihe ọ bụghị.
8. Foto ngosi IMAGINE na Festival City Mall
Akwụkwọ ụwa nke kasịnụ, Guniess Book Record na-emeri laser na nyocha mmiri. Site na isi iyi 30 na ụda gbara ya gburugburu iji jikọta ya na ndị na-ege ntị, IMAGINE bụ ihe ngosi dịka a hụtụbeghị mbụ. Ọ bụ nnukwu!.
Free na-eri. Ihe ngosi ahụ na-amalite na 6.30 PM na oge elekere ruo 10.30 PM
Ebe E Si Nweta: https://www.guinnessworldrecords.com/business-solutions/case-studies/dubai-festival-city
9. Okpokoro Dubai
Ọzọkwa, osisi kachasị n'ụwa, ebe a haziri nke ọma. Otu ụlọ elu nke nke gosiputara ihe gara aga nke Dubai ma na nke ọzọ nwere a mebere eziokwu gị, ebe a mara mma n'ime. Kwesịrị ịga leta otu oge.
ỤLỌ: AED 50 maka ndị okenye, enwere ụfọdụ maka ezinụlọ, ebe ụmụaka nọ n'okpuru 5 na-aga n'efu.
Ebe E Si Nweta: https://www.dubaiframe.ae/en
10. Dubai Glow Ogige
Nke a bụ ebe a ga-eleta ma anyanwụ dara, ebe ị ga-eleta tinyere ụmụaka na-eme ya obi ụtọ karịa. Nke a gunyere Dinosaur par, ogige nkwado na ogige ntụrụndụ (nwere tikiti dị iche), mana ahụmihe juru eju na mmadụ niile.
Na-amalite n'ọnwa Ọktoba & nọgidere na-emeghe ruo ọgwụgwụ nke May, kwụọ ụgwọ AED 65 (ụmụaka nọ n'okpuru 3 na-aga n'efu).
Ebe E Si Nweta: http://www.dubaigardenglow.com/